AUKEY dia mampiditra mpamadika vaovao dimy misy doka Dynamic | Vaovao momba ny gadget
AUKEY dia iray amin'ireo marika malaza amin'ny sehatry ny bateria na ny charger. Izy ireo dia manana karazana charger, namboarina mba hahomby kokoa ary handoa ny fitaovantsika amin'ny fomba mety indrindra. Ny orinasa dia manolotra karazana charger maranitra vaovao, izay natao hampiasaina amin'ny finday na solosaina finday.
Lozam-pifamoivoizana dimy vaovao no asongadin'ity sokajy AUKEY ity. Izy rehetra ampiasao ny teknolojia Dynamic Detect. Misaotra an'io fa voamarika raha misy fitaovana mifandray na rehefa misy roa, mamela ny herin'ny charger hizara eo amin'izy roa. Arak'izany dia mahazo fiampangana mahomby kokoa.
1 AUKEY USB C Network Charger miaraka amin'ny Dynamic Detect
2 AUKEY USB C Charger miaraka amin'ny Power Delivery 3.0 & Dynamic Detect
4 AUKEY USB C Charger miaraka amin'i GAN
AUKEY USB C Network Charger miaraka amin'ny Dynamic Detect
Ny maodely voalohany dia ity mpamaky rindrina marika ity, izay mamela 30W ny enta-mavesatra. Izy io dia hampiasaina amin'ny telefaona mifanentana na solosaina finday. Ity charger ity dia manana miaraka amina output USB sy Power Delivery 3.0 mahazatra ho an'ny famahanana fitaovana USB-C sy USB. Ho fanampin'izany, isika dia afaka mampiasa ny seranana roa amin'ny fotoana iray, mamela na dia amin'ity tranga ity aza ny fitaovana iray dia manana herin'ny 18W.
Misaotra an'io fa azo atao ny mankafy fiampangana haingana sy mahomby. Ankoatr'izay dia mifanaraka amin'ny safidin-telefaona marobe eny an-tsena izy io. Ity charger AUKEY ity dia a charger manify sy maivana ary matevina, izay azontsika ampiasaina ao an-trano, fa hiaraka aminay amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fotoana rehetra koa. Mora entina
Ity charger AUKEY ity dia mety ho mividy amin'ny vidiny 30,99 euro amin'ny Amazon, Tsy misy vokatra..
AUKEY USB C Charger miaraka amin'ny Power Delivery 3.0 & Dynamic Detect
Ny charger faharoa dia mitovy amin'ny maodely teo aloha. Amin'ity tranga ity dia seranana USB-C roa, izay hahafahantsika mampandoa karazana fitaovana rehetra, toy ny telefaona. Tombony iray hafa koa ny fiarahana amin'ny telefaona maro be, manomboka amin'ny maodely Android ka hatramin'ny maodely iPhone. Ity charger manokana ity dia manome hery 36W ho antsika.
Misaotra an'io ihany afaka mandoa fitaovana roa miaraka isika, izay hahatonga ny fahefana 18W amin'ity tranga ity. Mbola safidy tsara ny mandoa haingana ny fitaovana iray. Ho fanampin'izay, kely sy kely lanja isika, dia afaka mitondra azy miaraka amintsika foana, na miasa na mandeha. Tena mahazo aina amin'ity lafiny ity.
Ity maodely misy ny lozisialy charger AUKEY vaovao ity dia azontsika atao Tsy misy vokatra..
Ny charger fahatelo amin'ity laharana vaovao ity manomboka amin'ny AUKEY dia mahery Charger USB. Izy io dia miaraka amin'ny fivoahan'ny USB sy Power Delivery 3.0 mahazatra ary natao hiampangana fitaovana USB-C sy USB amin'ny fomba mahomby. Amin'ity charger ity dia afaka mahazo vola 60W isika, izay azo ampiasaina amin'ny seranana USB-C amin'ny fotoana rehetra. Raha te-handoa fitaovana roa miaraka isika dia afaka mampiasa 45W an'ny fandefasana herinaratra rehefa mampiasa seranana roa miaraka.
Izany dia malefaka, maivana ary mora ampiasaina modely, araka ny hitantsika ato amin'ity sokajy orinasa ity. Mamela azy io ho entina foana na aiza na aiza tiantsika miaraka amintsika. Ary koa, ity charger ity Izy io dia manana mpampitohy aforitra izay mahatonga azy io ho ilaina kokoa sy azo entina. Ilaina amin'ny famerenam-bola any an-trano, any amin'ny birao na eny an-dalana.
Azontsika atao ny mividy azy io amin'ny Amazon, Tsy misy vokatra., amin'ny vidiny 49,99 euro.
AUKEY USB C Charger miaraka amin'i GAN
Ny charger fahefatra ao anatin'ity faritra AUKEY ity dia miavaka amin'ny fampiasana azy la haitao mandroso GaN. Ity teknolojia ity no ahafahana mahazo sarany haingana be. Ka azo ampiasaina amin'ny modely maro toy ny MacBook Pro, iPhone XS, XS Max, XR, Nintendo Switch na fitaovana hafa mifanaraka amin'ny USB-C.
Ity charger ity dia manome antsika fidirana amin'ity sarany tena haingam-pandeha ity, miaraka amin'ny herinaratra 60W, nefa tsy manana habe lehibe kokoa. Amin'ny fotoana rehetra dia mitazona famolavolana tena feno izy io. Azonao atao ny mitondra azy na aiza na aiza, anaty kitapo, kitapo na valizy. Ho fanampin'izany, dia namboarina tamin'ny fomba iray hisorohana ireo fitaovana tsy hanintona be loatra ankehitriny na hanakanana azy ireo ho be loatra mandritra ny famandrihana.
Ny vidiny dia mazàna vidiny 42,99 euro. Na dia vidiany vonjimaika aza dia azo vidiana ao Amazon amin'ny vidin'ny 34,99 Euros ihany, Tsy misy vokatra..
Ity charger fahadimy ity angamba no maodely ambony indrindra amin'ity faritra ity manomboka amin'ny AUKEY. Izy io dia charger izay manana herin'ny 60W, ary misy port USB-C roa koa. Azontsika atao koa ny mandefa fitaovana roa mifanentana amin'ny fotoana iray, na telefaona na solosaina finday. Ny tombony lehibe omeny antsika dia ny ahafahantsika manafatra solosaina finday sy telefaona miaraka amin'izay, fa na tsy misy fiatraikany na tsy miverina miadana aza.
Famolavolana paikady izay hitantsika amin'ity sehatra ity dia mbola misy ao. Ka aseho azy ho safidy tsara rehefa mandeha dia miaraka aminy. Maivana, kely ny habeny ary matanjaka. Ankoatry ny maha-azo antoka azy, aza misoroka ny hafanana be loatra na ny fihoaram-pefy.
Charger ity dia misy amin'ny vidiny 59,99 euro amin'ny Amazon, Tsy misy vokatra..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Accessories » AUKEY dia manome lozisialy maranitra dimy ho an'ny finday sy laptop